Ankizivavy mitsotra: inona izy ireo, inona ny toetra ananany ary ohatra | Famoronana an-tserasera
Azo antoka fa efa nandre na namaky ilay teny hoe pin-up ianao. Angamba ianao afaka nahita sary vitsivitsy an'ny tovovavy natsindroka tamina Internet izay nahasarika ny sainao. Fa raha ny tena izy, ny zavatra mety tsy fantatrao dia io sary, sary, fanoharana io, raha ny marina dia fanamarinana ny vehivavy.
Ary moa ve ireo zazavavy mihidy dia noheverina ho "zazavavy mpikomy." Saingy raha ny tena izy dia misy tantara ao aorianao izay angamba tokony ho fantatrao raha toa ka liana aminao ireo sary ireo. Azonay atao ve ny manazava azy aminao amin'ny alàlan'ny fitafiana azy amin'ny ohatra hita maso?
1 Inona no dikan'ny hoe pin-up
2 Ny niandohan'ny zazavavy pin-up
3 Mampiavaka ny zazavavy mihidy
3.1 Ny fihetsiky ny zazavavy mihidy
3.2 Taovolo mifangaroharo
4 Tovovavy misintona
Inona no dikan'ny hoe pin-up
Ny teny hoe paingotra dia manondro sary, indrindra amin'ny vehivavy, izay, amin'ny fihetsika ara-nofo, manintona, na mijery na mitsiky amin'ny fomba ratsy, dia misarika ny sain'ny mpijery. Io teny io dia niseho efa ela ary, na dia mety ho "anaram-bosotra" ho an'ireo olona nanolo-tena hotantaraina na aseho tahaka an'io, ny marina dia nampiasaina matetika tao amin'ny magazine, kalandrie, afisy sns. Any Espana, azo adika ho "tovovavy magazine", "zazavavy tetiandro" ...
Fa inona no dikan'ny hoe zazavavy mitsotra? Tokony ho fantatrao fa ny "pin" dia midika hoe pin; raha "miakatra" dia eo. Teny anglisy roa izay ny firaisan'izy ireo dia tonga amin'ny famoronana ilay hoe "mihantona amin'ny rindrina." Noho io antony io, ny sary rehetra, kalandrie, karatra paositra, sary… izay nahantona tamin'ny rindrina, ary koa nanana fihetsika manentana sy mihantsy… dia noheverina ho natsangana.
Ankehitriny, ny be mpahalala dia ny zazavavy mihaona nefa, raha ny tena izy, nisy ihany koa ny sary sy sarin-dehilahy, vitsy ihany. Ary fantatrao ve fa tsy nantsoina hoe zazavavy mihidy na zazalahy mihidy? Tsia tsia. Nandritra ny taona vitsivitsy dia nahazo anaram-bosotra hafa izy ireo, vetaveta sy vetaveta kokoa, toy ny "cheesecake", na amin'ny Espaniôla, "mofomamy fromazy", amin'ny vehivavy; ary "henan'omby", na pie hena, amin'ny lehilahy.
Ny niandohan'ny zazavavy pin-up
Mba hahitana ny niandohan'ny tovovavy pin-up dia mila miverina amin'ny 1920 isika. Manokana, any Etazonia. Tamin'izany fotoana izany, ny vehivavy dia tena voageja, izany hoe, raha nanao zavatra izay ivelan'ny mahazatra izy ireo, dia natahotra izy ireo. Ary tamin'izany fotoana izany dia nisy vehivavy te hiala tamin'ireny drafitra ireny ary manomboka manome hery ny vehivavy. Noho izany, ny sary sy ny afisy dia nanomboka nipoitra niaraka tamin'ny zazavavy izay niakanjo kely, tamin'ny endrika manintona, ratsy toetra ary eny, zavatra ara-nofo ihany koa. Ny mpihaino kendreny tamin'izany fotoana izany dia miaramila tanora, satria heverin'izy ireo fa ireo karazana seho ireo dia nampisondrotra ny toe-panahin'izy ireo (na zavatra hafa) ary izany no antony mahatonga ireo seho maro karazana miaraka amin'ireo karazana sary ireo hita amin'ny sarimihetsika.
Ary koa, kinova iray hafa ny amin'ny antony niantsoana azy ireo ho zazavavy mihidy dia ity, ny zava-misy izay nanompoan'izy ireo mba "hampiakatra ny moraly" an'ny miaramila, na hampisondrotra an'io "pin" io.
Nandritra ny taona 20 sy 30 dia nanomboka nozaraina marobe ireo karazana publication (sary, sary, afisy, magazine…). Voalohany, eo amin'ireo miaramila amerikana, saingy vetivety taorian'ny nanitarana ny mpijery azy.
Ary izany dia tamin'ny taonan'ny 40 sy 50 taona ny zazavavy pin-up dia lamaody niroborobo. Tamin'io folo taona io (taona 40) dia nipoaka ny Ady Lehibe Faharoa ary ny miaramila amerikanina rehetra dia nitondra sarinà tovovavy natsindrina satria lasa karazana marika tia tanindrazana sy "talisman" hody izy ireo. Raha ny tena izy dia tsy nanantona azy ireo teo amin'ny rindrin'ny efitranony na teo am-pandriana fotsiny izy ireo; Nentin'izy ireo hatraiza hatraiza, na dia tamin'ny fiaramanidina mpiady aza, satria tena zava-dehibe tamin'izy ireo izany.
Efa tamin'ny taona 50, satria be dia be ny sary, sary ... nanjary nirodana ny tsena, ary nanomboka nahaliana ny zavatra nataony. Hitan'ny olona loatra izy ireo ka tsy nahasarika olona intsony ary noho izany antony izany dia nanomboka niasa tamin'ny sehatra hafa ny sasany tamin'ireo zazavavy natsangana, na nanolo-tena ho an'ny sinema, ny stiptease na ny nampakarina be indrindra aza. magazine amin'ny tonony, toy ny "Play Boy." Vao mainka aza izany rehefa tamin'ny taona 60 tany ho any dia tsy voarara amin'ny sary intsony ny fitanjahana na ny tsy fahampian'ny akanjo. Na dia tamin'io fotoana io aza dia saika nanjavona, hatramin'ny 2014 dia lasa lamaody indray.
Mampiavaka ny zazavavy mihidy
Ny fiheverana azy ho iray amin'ireo vondron'ireo zazavavy nikatona tamin'io vanim-potoana fisondrotana io dia nidera an'ireo olona ireo. Ary toy izany koa ny tamin'ny lehilahy. Fa raha izany no izy, dia tsy maintsy naneho andian-toetra maromaro namaritra ireo olona ireo ianao. Ary izao no manaraka ireto:
Ny fihetsiky ny zazavavy mihidy
Araka ny efa noresahintsika, ny maha-zazavavy mihidy dia midika hoe manitsakitsaka ny fenitra, ary tsy miraharaha ny fanaovana azy na izay holazain'izy ireo. Noho izany, tsy maintsy nanjary vehivavy matoky tena ianao, manana fahatokisan-tena ambony ary tsy nety nanintona, sahy, maranitra, maditra mihitsy aza, tamim-pahamendrehana sy tamim-boninahitra foana, satria ny mampiavaka azy ireo amin'ny karazana vehivavy hafa dia ny manao azy. tsy latsaka amin'ny fahalotoam-pitenenana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia navelan'izy ireo teo am-bavany ilay tantely rehefa nanoro hevitra sy nanolo-kevitra izy ireo, saingy tsy nandeha lavitra intsony.
Ny onja, tadivavarana ary na dia ny toupe aza dia marika famantarana ny zazavavy mihidy. Ho fanampin'ireo loko amin'ny volo, na dia tsy mahazatra aza izany. Raha ny marina dia nisy brunettes sy blondes, fa ny redheads dia nanintona ny sain'ny maro noho io loko tsy mahazatra io.
Ho fanampin'izay, dia noravahan'izy ireo tamin'ny tsipìka sy kojakoja hafa ny volon'izy ireo hanomezana loko, indrindra rehefa "mahazatra" kokoa io.
Raha ny momba ny makiazy, dia kely no nampiasan'ny zazavavy kely, ary saika mifototra amin'ny famirapiratan'ny tarehy sy ny faritra amin'ny vatany izay hita. Ny toerana tena nikatsahan'izy ireo hanatsarana ny "charme" -ny dia ny molotra sy ny masony. Ho an'ity dia nampiasain'izy ireo ho toy ny ankafiziny ny loko mainty eo imasony, miaraka amin'ny famaritana lava amin'ny tadin'ny masony, ary narafitra tsara tamin'izy ireo ny volomaso ary nampitombo ny volomaso nandalo.
Raha ny molotra, ny loko mahazatra indrindra dia mena.
Na ny tsy fahaizany. Ary izany dia rehefa nandeha ny taona, ny "fisaronana" dia toetra mampiavaka ireo sary ireo. Tamin'ny taona 20, ny akanjo nentim-paharazana dia nampiseho ny ampahany tamin'ny vatan'ny vehivavy, saingy tsy nandeha lavitra intsony. Na izany aza, tamin'ny taona 40 no niova ny zava-drehetra, indrindra ny fampiasana sary izay avelan'ny mpanakanto "hisidina" kely ny fisainany amin'ny famoronana vehivavy mitafy akanjo (tsy misy azy ireo, fa fohy sy tery).
Tsy tavela koa ireo sary tena izy, satria nasehon'izy ireo tovovavy tsy miankina, matanjaka ary matoky tena, fa maivana amin'ny akanjony. Raha ny marina, ireo sary ireo dia nanjary nampiasaina mba "hanomezana" ireo mpankafy azy, na ho endrika fampisehoana ho an'ny asa mety hitranga.
Farany, mamela anao izahay hisafidy sary misy zazavavy kely natsangana. Ary ireo anarana toa an'i Elke Sommer, Janet Leigh, Bettie Page, Betty Grable na Ann Savage dia mifandraika amin'ity hetsika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Tovovavy misintona